Iindlela zokuThengisa ngeDijithali kunye noQikelelo | Martech Zone
Amanyathelo okhuseleko olwenziwe ziinkampani ngexesha lobhubhane aphazamise kakhulu ukuhanjiswa kwempahla, indlela yokuziphatha yokuthenga kwabathengi, kunye neenzame zethu zokuthengisa ezinxulumene noko kule minyaka imbalwa idlulileyo.
Ngokoluvo lwam, owona mthengi mkhulu kunye notshintsho lweshishini lwenzekile ngokuthenga kwi-Intanethi, ukuhanjiswa kwekhaya, kunye neentlawulo ezihambayo. Kubathengisi, sabona utshintsho olukhulu kwimbuyekezo kutyalo-mali kubuchwephesha bokuthengisa ngedijithali. Siyaqhubeka nokwenza okungaphezulu, ngaphezulu kwamajelo kunye namajelo, sinabasebenzi abambalwa-abafuna ukuba sincike kakhulu kwitekhnoloji yokulinganisa, yokulinganisa, kunye nokuguqula ngokwamanani imibutho yethu. Ingqwalaselo yenguqu ikwi-automation yangaphakathi kunye namava abathengi bangaphandle. Iinkampani ezaye zakwazi ukwenza i-pivot kunye nokulungelelanisa ngokukhawuleza zabona ukonyuka okuphawulweyo kwisabelo sentengiso. Iinkampani ezingakhange zisasokola ukubuyisa isabelo sentengiso esiphulukene nazo.
Ukukhupha iiNtengiso zeDijithali kwi2020
Iqela kwi-M2 On Hold lithulule idatha kwaye laphuhlisa i-infographic egxile kwi-9 yeendlela ezihlukileyo.
Intengiso yedijithali ihlala iguquka njengoko yenye yezona mveliso zihamba ngokukhawuleza kwihlabathi liphela. Ngaphandle koku, imikhwa ephambili iyaphuma kwaye isibonisa ezona zinto zibalulekileyo ziqhuba intengiso. Le bhlog iphinda iqikelele uqikelelo lwe-2020 ngesikhokelo sesalathiso se-infographic. Kunye nezibalo kunye nenyani, masiqwalasele iindlela ezilithoba zeenyanga ezili-12 ezidlulileyo kumaqonga, itekhnoloji, ezorhwebo, kunye nemveliso yokuqulathiweyo.
I-M2 ibanjiwe, i-9 yeNtengiso yeDijithali ye-2020
Iincoko ze-AI-Powered Chatbots -Iiprojekthi zeGartner ezincokolayo ziya kunika amandla i-85% yokunxibelelana kwenkonzo yabathengi kwaye abathengi bayaziqhelanisa kakuhle, bayayixabisa inkonzo ye-24/7, impendulo kwangoko, kunye nokuchaneka kweempendulo ezilula kwimibuzo. Ndingongeza ukuba iinkampani ezinobunkunkqele zisebenzisa iingxoxo eziguqula ingxoxo ngaphandle komthungo ziye kuye umntu ofanelekileyo wangaphakathi ukususa isiphithiphithi ngamava.
zobuqu - Zihambile iintsuku ze %% Igama lokuQala %%. Iiplatifomu zanamhlanje zokuthumela imiyalezo nge-imeyile kunye nokuthumela imiyalezo zibonelela ngezixhobo ezizenzekelayo ezibandakanya ukwahlulwa, umxholo oqikelelweyo osekwe kukuziphatha kunye nedatha yeedemokhrasi, kunye nokubandakanya ubukrelekrele bokuvavanya ukuvavanya nokwandisa umyalezo ngokuzenzekelayo. Ukuba usasebenzisa i-batch kunye ne-blast-to-many marketing, uyaphoswa ngumkhombandlela kunye nentengiso!
I-eCommerce yoLuntu kwiMidiya yoLuntu - (kwaziwa njenge URhwebo loLuntu or Ukuthenga kwaMthonyamaAbathengi bafuna amava angenamthungo kwaye baphendule ngeedola xa ifaneli yokuguqula ingenamthungo. Phantse lonke iqonga leendaba loluntu (kutsha nje TikTokUkudibanisa amaqonga e-ecommerce kwizakhono zabo zokwabelana ngokwasentlalweni, ukwenza ukuba abathengisi bathengise ngokuthe ngqo kubaphulaphuli ngokusebenzisa amaqonga entlalontle kunye nevidiyo.
I-GDPR iya kwiHlabathi liphela I-Australia, iBrazil, iCanada, ne-Japan sele zidlulisile imigaqo yabucala kunye nedatha yokunceda abathengi ekuhleni kunye nokuqonda indlela yokukhusela idatha yobuqu. Ngaphakathi eUnited States, iCalifornia yaphumelela California Umthetho wabucala wabathengi (I-CCPAKwiinkampani kuye kwafuneka zilungelelanise kwaye zamkele ukhuseleko olubanzi, ugcino, ukungafihli nto, kunye nolawulo olongezelelweyo kumaqonga abo akwi-intanethi ukuphendula.
Usesho lwezwi -Ukukhangela ngelizwi kungabhala ngesiqingatha salo lonke ukhangelo olwenziwa kwi-Intanethi kunye nokhangelo ngelizwi olwandisiweyo ukusuka kwizixhobo zethu eziphathwayo ukuya kwizithethi ezi-smart, oomabonakude, iibar zokuvakala kunye nezinye izixhobo. Abancedisi ababonakalayo bafumana ngokuchanekileyo ngakumbi nangakumbi ngokusekwe kwindawo, iziphumo ezizezakho. Oku kunyanzela amashishini ukuba awugcine ngononophelo umxholo wawo, awucwangcise uya kuwenza, kwaye awusasaze naphina apho ezi nkqubo zifikelela khona.
Ividiyo emide - Ukuqwalaselwa okufutshane yintsomi engenantsingiselo enokubenzakalisa kakhulu abathengisi kule minyaka idlulileyo. Nokuba ndiyilwile, ndikhuthaza abathengi ukuba basebenze kumaxesha okwanda kweencwadana zolwazi. Ngoku ndicebisa abathengi bam ukuba bayile ngononophelo iilayibrari zomxholo ezilungelelaniswe kakuhle, ngokucokisekileyo, kwaye zinike zonke iinkcukacha eziyimfuneko ukwazisa abathengi. Ividiyo ayifani, nabathengi kunye nabathengi beshishini basebenzisa iividiyo ezingaphezu kwemizuzu engama-20 ubude!
Ukuthengisa ngokuSebenzisa iiNkqubo zokuThumela imiyalezo -Kuba kaloku sihlala sidibene, imiyalezo ngexesha elifanelekileyo yemiyalezo efanelekileyo inokuqhuba ukubandakanyeka. Nokuba sisixhobo esiselfowuni, isaziso sesikhangeli, okanye izaziso zesiza ... imiyalezo ithathe indawo njengonxibelelwano oluphambili lwexesha lokwenyani.
Ukwanda kwenyani kunye neNyani eyiyo - AR & VR Ziyabandakanywa kwii -apps zeselfowuni kunye namava abathengi apheleleyo. Nokuba lilizwe lokwenyani apho udibana nomthengi wakho olandelayo okanye ngokudibeneyo ujonge ividiyo ...
Kukubhadla okungeyonyani - AI kunye nokufunda ngomatshini kunceda abathengisi ukuba basebenze, bazenzele, kwaye bandise ixesha lokuphuma kwabathengi kunanini na ngaphambili. Abathengi kunye namashishini bayakhathala ngamawaka emiyalezo yentengiso etyhalelwa kubo yonke imihla. I-AI ingasinceda ukuba sihambise imiyalezo enamandla ngakumbi, ebandakanyekayo xa zinempembelelo enkulu.
Kwi-infographic engezantsi, fumana izihloko zentloko ezisithoba ukusuka kwi-2020. Esi sikhokelo sichaza indlela ezi ntsingiselo ezichaphazela ngayo intengiso kunye namathuba okukhula abawabonisayo ngoku.
tags: aiIincoko ze-aikukubhadla okungeyonyaniiingxoxoumxholo wentengisoiindlela zokuthengisa nge-imeyileFacebookkwi-infographiciindlela zokuthengisa ezizenzekelayoiindlela zentengisoiintsingiselo mobileIvenkile yokuthengaUkulungiswa kolwimi lwendalonlpezomntuNgokwezifisoTwilleyisikhundla2Ukubikezelaukwenziwa kwengcaciso kwangaphambiliisahlulongeneezentengisoImidiya yokuncokolaiindlela zosasazo lwasekuhlaleniTikTok
Jan 17, 2014 kwi-7: 38 AM
Ngokungathandabuzekiyo, ibhlog yakho ngumthombo omkhulu we-infographics emangalisayo. Kananjalo, onke amanqaku ebhlog yakho abhalwe ngobungcali kwaye abhalwe kakuhle.
Enkosi ngokwabelana ngolwazi lwe-infographics!
NgoJanuwari 20, 2014 ngo-11:36 PM
Douglas Karr ! Ukwabelana ngolwazi ngokwenene. Uye wachaphazeleka kuyilo olunengeniso, imibono. Kwakhona ndiyabulela kakhulu
Feb 12, 2014 ngo-7: 35 AM
Unyaka omtsha uza nayo, amathuba amakhulu kunye nembonakalo yomhlaba ye-intanethi eya isiba nzima ngemini. Ishishini lihlala litshintsha, kodwa yiloo nto eyenza ukuba ibe mnandi kakhulu.
Feb 12, 2014 ngo-7: 44 AM
Ewe, Inyani yeyokuba Nyaka ngamnye ndizama ukuthobela iingcinga zam malunga noko kuya kutsala umdla
kwaye ibalulekile kwi-apile yeshishini le-ajenda kunye ne-ecommerce yonyaka
Mar 21, 2014 ngo-8: 00 AM
Ngenene ulwazi kakhulu post. Esi sisithuba esimnandi ngokwenene. Wongeze ulwazi oluninzi kwibhlog yakho. Enkosi ngokwabelana ngolu lwazi luxabisekileyo. Iluncedo ngokwenene kwaye iyafundisa kananjalo.
Jul 30, 2014 ngo-7: 23 AM
Molo Douglas iingcebiso bezilungile. Qhubeka uPosta.
Aug 3, 2014 ngo-1:02 PM
Enkulu kwaye iluncedo Infographic Douglas! Ngoku ndiyazi ukuba phantse abenzi bezigqibo kwishishini lehlabathi bakhetha ukusebenzisa imidiya yoluntu kuzo zonke izinto zabo zomsebenzi. Enkoso ngokwabelana!
Nov 7, 2020 ngo-10:52 AM
Iingcebiso ziyamnandi. Qhubeka nokuthumela
Nov 7, 2020 ngo-10:53 AM
Agasti 25, 2021 kwi-6: 48 AM
Ngaba lo mxholo usasebenza ngo-2021?
Aug 25, 2021 ngo-12:21 PM
Molo John, ndicinga ukuba iindlela zika-2014 zinyanisekile ngoku, ziqhutywa phambili ngabantu abasebenza ekhaya kunye nokuthenga kwizixhobo zabo eziphathwayo.
Undikhuthaze ukuba ndihlaziye esi sithuba sika-2021 nge-infographic enkulu kunye neenkcukacha ezivela kwi-M2 kwi-Hold.
URamya Shree S
Nov 3, 2021 ngo-6:29 AM
enkosi kwaye unengqiqo. enkosi kakhulu ... ndijonge phambili ekufundeni ngakumbi kuwe